Ulusebenzisa njani uvavanyo lwexesha lekota ukumisela ukuba ingaba uthotho luyaguquka na
Ukuba imigaqo nganye yothotho (ngamanye amagama, imigaqo yothotho 'ngokulandelelana) ayiguquki ukuya ku-zero, emva koko uthotho kufuneka lujike. Le yi n Uvavanyo lwexesha lokwahluka. Oku kuhlala kunjalo kakhulu uvavanyo olulula ukuyisebenzisa.
Inkqubo ye- n Uvavanyo lweKota:
(Ngokuqinisekileyo uqikelele ukuba ngalo mqondiso wesishwankathelo ohamba ze, n Ibaleka ukusuka ku-1 ukuya kubomi obungapheliyo.)
Ukuba ucinga ngayo, le yinto eqhelekileyo. Xa uthotho luguquka, isixa sayo yonke imigaqo siyangena kwinani elithile. Ekuphela kwendlela enokuthi yenzeke ngayo kuxa amanani ongezwayo esiphelweni sothotho efumana amancinci ngokuncinci ngokufana noluhlu:
Khawufane ucinge, endaweni yoko, ukuba imigaqo yothotho iyahlangana, yithi, kuye ku-1, njengakuthotho
Kwimeko apho, xa udibanisa amagama, uyaqhubeka ukongeza kumanani ngokusondele kakhulu ku-1 ngaphezulu nangaphezulu nangaphezulu nangonaphakade- kwaye oku kuyakudibanisa nokungafikeleli. Ke, ukuze uthotho luhlangane, imigaqo yoluhlu kufuneka iguqulwe ibe ngu-zero. Kodwa qiniseka ukuba uyayiqonda le nto n Uvavanyo lwexesha hayi yithi.
Xa imigaqo yothotho iguqukela kwi-zero, oko akuqinisekisi ukuba uthotho luyahlangana. Kwi-hifalutin logicianese-inyani yokuba imiqathango yothotho iguqukela kwi-zero yi iyimfuneko kodwa hayi yanele imeko yokugqiba ukuba uthotho luguqulela kwisiphelo esipheleleyo.
Kuba olu vavanyo luhlala lulula kakhulu ukulusebenzisa, kufanele ukuba ibe yenye yezinto zokuqala ozijongayo xa uzama ukufumanisa ukuba ingaba uthotho luyaguquka na okanye luyajika na. Umzekelo, ukuba uceliwe ukuba unqume ukuba ngaba
iyahlangana okanye iyajika, qaphela ukuba yonke ikota yolu ngcelele linani elikhulu kune-1 eliphakanyiselwe kumandla aqinisekileyo. Oku kusoloko kukhokelela kwinani elingaphezulu kwe-1, kwaye ngenxa yoko, imiqathango yolu ngcelele ayiguquki iye ku-zero, kwaye ke uthotho kufuneka luhlukane.
Inkqubo ye- n Uvavanyo lwekota alusebenzeli uthotho oluqhelekileyo oluqhelekileyo, kodwa lusebenzela uthotho olunemigaqo elungileyo nengalunganga.
Ingaba igeneric generic izakubiza malini
isebenza njani i-gabapentin
Ngaba idesktop yam ineBluetooth
indlela yokwenza crunches ngokufanelekileyo
zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-zofran